Umhla My Pet » Indlela Uthando Njani naxhala nina engxakini?
ukubuyekezwa: Jan. 17 2021 | 2 min ukufunda
Amava eziwela kulo uthando yinto wonke kufuneka ubuncinane kanye / ebomini bakhe. Into entle kukuba bambalwa kakhulu abantu sinelungelo ngokwaneleyo ukuba la mava emangalisayo.
Nangona uhambo ngokuba uthando okunesondlo ngokweemvakalelo, zikho nezinye izinto ezininzi ezenza ukuba ubomi uthando ebalulekileyo kakhulu. Uthando ngokwenene kukugcina liyaphuma embandezelweni; ufunda ukuze bazi ukuba.
Uya ngokobudala ngokucothayo
Yintoni Bekuyinkathazo ezinkulu kuno sijonge endala? Uthando akuyekise ngamaxhoba waluphale. Ngaba uyazi malunga yioxytocin (le romantics zibhekisela kulo uthando hormone)? Ndiyakuthanda ukwenza iziphumo Nyusa kwizinga yioxytocin emzimbeni womntu. Yioxytocin ichukumisa imveliso dhea, ncindi eyaziwa ngokuba izibonelelo zalo anti-ukuguga.
Musa ubone ukuba ulusu lwakho bomvu emva kokwabelana ngesondo? Musa uqaphele ukuba uziva njani odlamkileyo kusasa emva? Zonke ezi ngenxa yenzuzo anti-ukuguga ye dhea.
Uthando ndingokufundisa unokuqiniseka
Igunkcu okanye nokungayithembi kunokukhokelela kuphela into enye, ubomi ziinkathazo. Oku unokukuthintela ekufumaneni umsebenzi o right; oko kunokuthintela ukuba uzenza weva ngamaxesha obunzima, kwaye ekugqibeleni kukunyanzela ukuba uhlale kwiqumrhu ongaphantsi oko sikufanele ukuba.
Enye iziphumo ezingcono icala uthando inkxaso ukuzithemba. Xa usabelana ngokuthandana nomntu badla loo mntu ikwenza uzive ngathi superman / Superwoman. Ewe, neqabane lakho ukuze zikugxeke imibandela ethile, kodwa ngokubanzi usoloko uhlale ngcono kuye / yakhe. Oku kuya mabawubuyisele ngokuzenzekelayo self-ukukholelwa wena ukuba ungumntu Ukuzithemba; kwaye xa isiqingatha siqinisekile iingxaki zakho kuconjululwa.
Uthando kukugcina kude iziyobisi
Akunakubakho njengenyathelo lothintelo ngcono okanye ngeyeza kakubi iziyobisi ngaphezu kothando. Abantu eUnited States lukhathazekile gqitha izinga lokukhula kakubi kweziyobisi; uthando kuba simse kule ngxaki.
Imikhwa ezifana nokusetyenziswa kakubi kweziyobisi kunye nokusela kakhulu idla byproducts ukudandatheka. A emtshatweni ezaliswe luthando esinokugcina ukudandatheka kwibheyi kwaye ke ngoko ulinciphise ngayo amathuba wokunikezela gwenxa kweziyobisi notywala kakhulu.
Uthando kuthintela STDs
Xa ubona umntu omthandayo, akuyi kuphela eningalikhumbuleliyo / ukuba abe onyanisekileyo kuwe, kodwa badla ukuphepha ukwenza nantoni scratchy emva komhlana loo mntu. Ukubeka ngakumbi okhule, abantu uthando musa soyike ukubeka zama ukuhlala sinyanisekile kwaye loo nto ngokuyintloko kuba asifuni kumenzakalisa umntu bayamthanda. kodwa, njani kuza engadityaniswa kunye nokuthintela STD?
Kukho unxibelelwano entle kakhulu.
Abantu luthando ngenxa tryst yabo ukunyaniseka ngokuqhelekileyo musa izibiliboco namaqabane amaninzi ngesondo yaye oku kunciphisa amathuba abo STDs ekuphuhliseni. Ewe, nto ngolohlobo nje.
Ezi abathile iinkathazo uthando ukukhusela wena. Ukuba ufuna ukwazi ukuba yintoni uthando ukwenza, kuwa kanye uthando.